उपभोक्ताले ग्यास स्टक राख्न खोज्दा उद्योगी 'लटरी' लाग्यो - Himali Patrika
१० असार २०७८, बिहिवार
उपभोक्ताले ग्यास स्टक राख्न खोज्दा उद्योगी ‘लटरी’ लाग्यो
हिमाली पत्रिका १४ बैशाख २०७८, 12:55 pm
उद्योगमा ग्यास भरिभराउ, बिक्री नभएर हैरान भएका उद्योगीलाई उपभोक्ताले स्टक राख्न खोज्दा ‘लटरी’काठमाडौं। कोभिड संक्रमण बढेसँगै नेपाल आयल निगमले सबै ग्यास उद्योगलाई प्लान्ट पूर्ण क्षमतामा राख्न र सिलिण्डर पनि खाली नराख्न परिपत्र गर्‍यो।
डेढ साता अघि निगमले पठाएको परिपत्र अनुसार ग्यास उद्योग संघले उपभोक्तालाई खाली सिलिण्डर नराख्न र समयमै जोहो गर्न अपिल गर्‍यो। सार्वजनिक रूपमा संघले सूचना निकालेपछि अहिले ग्यास डिपोमा ग्यास लिने उपभोक्ता बढेका छन्।
ग्यास बिक्रेता महासंघ नेपालका अध्यक्ष ज्ञानेश्वर अर्यालले उपभोक्ता आत्तिएर ग्यास भण्डारण गर्न थालेको बताए। ‘संघले निकालेको सूचनापछि उपभोक्ताले ग्यास भण्डारण गर्न लागेका छन्। तर अहिले उपभोक्ताले माग भन्दा बढी लिएर जानुपर्ने अवस्था देखिदैन्,’ उनले बिजमाण्डूसँग भने।
ग्यास कति छ?
आयल निगमले ग्यास आयात पर्याप्त रहेकोले उपभोक्ता आतिनुपर्ने अवस्था नरहेको जानकारी दिएको छ। गत मार्चमा मात्रै भारतबाट ४७ हजार टन ग्यास आएको छ। यो अहिलेसम्मकै धेरै आयात हो।
गर्मी समयमा गिजर र कोठा तातो बनाउन ग्यास प्रयोग नहुने भएकाले माग अझै घट्छ। त्यसमा पनि काठमाडौं लगायतका धेरै सहरमा निषेधाज्ञा जारी भएकाले होटल र रेष्टुरेन्ट बन्द हुनेछन्। त्यसमा प्रयोग हुने ग्यासको खपत पनि कम भएकाले अभाव हुने अवस्था छैन।
निगमका प्रवक्ता विनितमणि उपाध्यायले उपभोक्ता नचाहिने हल्लामा लाग्नुपर्ने अवस्था नरहेको बताउँदै ग्यास अभाव हुनै नसक्ने जिकिर गरे। ‘भारतबाट पनि अहिले सहज रूपमा ग्यास आइरहेको छ। भारतका कुनै पनि पेट्रोलियम प्लान्ट बन्द भएका छैनन्। नेपालभित्रै पनि माग भन्दा बढी ग्यास छ,’ उनले भने, ‘अहिले उपभोक्ताले आफूसँग भएको ग्यास प्रयोग गरेर बसे हुन्छ। अभावको कुनै गुन्जायस छैन।’
उपाध्यायका अनुसार कोभिडकै कारण एक वर्षदेखि ग्यासको खपत नै कम छ। अहिले पनि कतिपय उद्योगले क्षमताभन्दा कम मात्रै ग्यास बेच्नु परेको छ। ‘व्यवसायिक क्षेत्र राम्रोसँग नखुलेको एक वर्ष भइसक्यो। कतिपय उद्योगले एक वर्षदेखि राम्रोसँग बेच्न नपाएर समस्यामा छन्,’ संघका एक पदाधिकारीले भने, ‘उपभोक्ताले यति सामान्य कुरा पनि नबुझेर ग्यास खोज्न लाइनमा बस्नु भनेको मुर्खता हो।’
हल्लाको पछि लागेर उपभोक्ताले ग्यास स्टक राख्न खोज्दा उद्योगीलाई लटरी लागेको उनी बताउँछन्। ‘ग्यास बिक्री नभएर उद्योगी चिन्तित थिए। हल्लाले व्यापार बढेर उनीहरुलाई सहज भएको छ,’ ती उद्योगीले भने।
‘सूचनालाई गलत व्याख्या गरियो’
संघका अध्यक्ष गोकुल भण्डारीले कोभिड संक्रमणको दर बढ्दै गएपछि लकडाउन पनि हुनसक्ने भएकाले उपभोक्तालाई आवश्यक मात्रामा ग्यास जोहो गर्न आग्रह गरेको बताउँछन्।
‘हाम्रो उद्देश्य उपभोक्तालाई त्रसित बनाउने होइन। निगमले सबै उद्योगलाई माग अनुसार ग्यास भरेर राख्नु भनेर परिपत्र गर्‍यो। हामीले पनि उपभोक्तालाई केही समयलाई आवश्यक ग्यास जोहो गर्न भनेका हौं। त्यसलाई गलत व्याख्या गरिएको मात्रै हो,’ उनले बिजमाण्डूसँग भने, ‘अहिले ग्यास मागेजति दिन सकिने अवस्था छ। भारतबाट पनि मागे अनुसार आइरहेको छ। उद्योगीले विगतको लकडाउनका बेलामा आपूर्ति गरेकाले आत्तिनुपर्ने अवस्था छैन।’
भण्डारीका अनुसार अहिले सबैजसो उद्योगको प्लान्ट भरिभराउ रहेको र सिलिण्डर समेत भरी अवस्थामा छ। ‘मेरै नेपाल ग्यासको हकमा काठमाडौंमा मात्रै हजार टन स्टोरेज छ। हामीले माग अनुसार ग्यास दिनसक्ने अवस्था छ,’ उनले भने, ‘घ्ररमा ग्यास हुँदाहुँदै पसलमा धाउनु पर्दैन। निषेधाज्ञामा पनि सहजरूपमा डिपोमा ग्यास आउँछ।’
भिक्टोरिया क्रस विजेता तुलबहादुर पुनको नाममा बेलायतमा रेल सेवा शुरू
अदालतले रबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन आदेश दिन सक्ने
फागुनमा सकिँदैछ मेयर शाक्यको पाँचवर्षे कार्यकाल, कहाँ पुग्यो नगरवासीले चढ्ने…
फेरि बढ्यो इन्धनको मुल्य, अब पेट्रोल प्रतिलिटर १२७
विश्वप्रकाशको प्रश्न : मन्त्रीले नै जातीय विभेदको पक्षपोषण गर्ने ?
यी हुन् स्वास्थ्यमन्त्री शेरबहादुर तामाङले १९ दिनमा गरेको चार वटा…
यूएईले अनुमति दिएका यी दुई खोप लगाएपछि मात्र प्रवेश अनुमति…
नरेन्द्र बस्नेत / राताेपाटी लण्डन । भिक्टोरिया क्रस विजेता गोरखा सैनिक तुलबहादुर पुनको नाममा बेलायतमा बुधबारबाट रेल सेवा शुरू गरिएको छ । लन्डनको प्याडिङटन स्टेशनमा…
कानुन व्यवसायीहरूले नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले आफ्नो स्पष्ट बहुमत दाबी गर्दै दायर गरेको रिट निवेदनमा सांसदहरू आफैं अदालतमा आई हस्ताक्षर गरेकाले देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन…
आजभन्दा चार वर्षअघि काठमाडौं महानगरपालिकाको मेयरमा चुनाव लड्दै गर्दा विद्यासुन्दर शाक्यले आफ्नो कार्यकालमा काठमाडौंमा मेट्रो रेल र मोनो रेल कुदाउने प्रतिवद्धता जनाएका थिए । मेयर…
काठमाडौं : नेपाल आयल निगमले फेरि इन्धनको मूल्य बढाएको छ। बुधबार राति १२ बजेपछि लागू हुने गरी निगमले इन्धनको मूल्य बढाएको प्रवक्ता विनितमणि उपाध्यायले जानकारी…
काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले सरकारका मन्त्रीहरूले नै जातीय विभेदको पक्षपोषण हुने गरी सन्देश दिएको टिप्पणी गरेका छन्। रूपा सुनारलाई दलित भएकै कारण…